विदेशी मुद्राको सटही दर, कुन देशको कति ? - Naya Pusta
विदेशी मुद्राको सटही दर, कुन देशको कति ?
काठमाडौं, २६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ३५ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १६ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ३२ रुपैयाँ छ।
युएई दिर्हाम एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९२ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ २४ पैसा र विक्रिदर २६ रुपैयाँ ३९ रहेको छ।
कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ४५ पैसा र विक्रिदर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । एक कुवेती दिनारको एकको खरिददर ३ सय ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा छ भने विक्रिदर ३ सय ४३ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ।
एक बहराइन दिनार एकको खरिददर २ सय ७२ रुपैयाँ ०१ पैसा र विक्रिदर २ सय ७३ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन्।
थप खबरहरु हेर्नुहोस् ….
नेपाल आज ओमानसँग खेल्ने,यस्तो छ नेपाल र ओमानको इतिहास
काठमाडौं । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूको दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बिहीबार नामिविया विरुद्ध खेलेको मैदान एफिज पार्कमा नेपालले दिउसो सवा १ बजेबाट ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो
यतिबेला ओमान डिभिजन ३ को च्याम्पियन बन्दै डिभिजन २ मा उक्लिएको हो भने नेपाल डिभिजन १ बाट झरेको हो । यो प्रतियोगिता अगाडी ओमानले अमेरीकासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो । यसका साथै उसले घरमा नै अभ्यास गरेको थियो । जारी प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियालाई १ विकेटको झिनो अन्तरले हराउँदा ओमान क्यानडासँग ८ विकेटले हारेको थियो।
काठमाडौं । चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । खड्गीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले बिहीवार पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ लगत्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको सिआईबीले जनाएको छ। अदालतले पाँच दिन थुनामा राखि खड्कीमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ। विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नेपाली युवाहरुलाई ठूलो रकम लिएर कोरिया पठाएको आरोपमा सिआईबीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
रकम लिएर नेपालीलाई कोरिया पठाएको र कोरिया गएका युवाहरु स्वदेश नर्फिएको भन्दै सिआईबीले उनीमाथि मानव तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको हो।
कोरियन वन निरन्तर उकालो लाग्दै, रियाल, रिंगिट, दिर्हामको मूल्य थोरै घटबढ
मनीचेन्जरले विदेशी पर्यटकलाई पीओएसबाट मुद्रा साटिदिने